MAQAAL: Xalka Doorashada Soomaaliya Waa Qof iyo Cod | HalQaran.com
Home Opinion MAQAAL: Xalka Doorashada Soomaaliya Waa Qof iyo Cod
MAQAAL: Xalka Doorashada Soomaaliya Waa Qof iyo Cod
Soomaalidii hore markay shukaansiga ka hadlayaan waxay ka ku kaftami jireen Labadii walaala ah midkii lacag leh baa wayn.
Sidoo kale, doorshada Soomaaliya ha ahaato maamul goboleed ama mid dawladda dhexe, la iskuma doorto waddaninimo, hawlkarnimo, khibrad, aqoon, iyo daacadnimo toona ee waxaa la isku doortaa lacag iyo in la laaluusho oday dhaqameedyada iyo xildhibaanada wax dooranaya.
Lacagta laaluushka ah oo lagu gadanayo codka xildhibaanka kuma eka keliya doorahada waddanka gudihiisa ka dhacda ee xataa shakhsiyaad, waddamo, ama shirkado shisheeye markii ay rabaan inay dan ka fushadaan Soomaaliya waxay isticmaalaan oo lacag siiyaan siyaasiyiin ama madax hore oo Soomaaliyeed si ay shisheeyaha ugu soo dhameeyaan in xildhibaanadu codkooda ku taageeraan qaddiya qadiyadda loo codaynayo.
George Orwell isna wuxuu yiri dadka doorta siyaasiyiinta xun-xun ma aha dulmanayaal ee waa dulmi kal-kaalayaa (A people who elect corrupt politicians, imposters, thieves, and traitors are not victims … but accomplices.)
Wali ma is waydiisay sababta had iyo jeer xildhibaanadu u keeni jireen “Motion” ay ku ridayaan dawladda ama madax gaar ah? Sababtu waxay ahayd inay codkooda ka gadaan cidda bixinaysa lacagta ugu badan.
Xildhibaanada Soomaalida badankoodu ma aha dad aqoon ama khibrad u leh siyaasad, maamul, sharci dejin, maaraynta dhaqaalaha, isla xisaabtan, ama dawlad wanaag. Waa dad lagu soo doortay lacag, magac qabiilna meesha ku jooga laakiin aan qabiil, gobol, iyo waddan toona dan u ahayn, waxna u qaban. Haddii lala xisaabtamo lama helayo hal xildhibaan oo degaanka uu ka soo jeedo wax u qabtay, sida mashaariic horumarin, ama adeegyada kala duwan bulshadu degaankiisu u baahan tahay.
Way adkaanaysaa in Soomaaliya ka baxdo jaah wareerka siyaasadda iyo isqab-qabsiga had iyo jeer dhaca xilliga doorashada haddii aan la helin doorasho ku salaysan xisbiyo kooban iyo qof-iyo-cod. Bal aan is waydiino sidee u dhici kartaa in Soomaaliya oo faqiir ah, dadkeeduna ka yar yahay 15 milyan ay yeelato ku dhowaad 100 xisbi siyaasadeed, kuwaas oo badankoodu ku salaysan yihiin qabiil, ayna hoggaaminayaan shakhsiyaad aan lagu aqoon waddaninimo, wax-qabad, ama daacadnimo.
Taa waxaa ka sii daran in maamul goboleedyada iyo mucaaradka Soomaaliya aysan oggolayn doorasho qof iyo cod ah sababta oo ah waxay ka baqayaan in ay soo baxaan xildhibaano iyo madax shacabku si xor ah u soo doorteen, kuwaas oo lagula xisaabtamo wax qabadkooda. Taa baddalkeeda waxay rabaan doorasho loo maro oday dhaqameedyo dhuuni qaatayaal ah kuwaasoo soo xula xildhibaanada beeshooda matalaya.
Haddaba si looga baxo in la isku doorto qabiil iyo laaluush waa in la helo ugu yaraan waxyaabaha hoos ku qoran.
Waa in xildhibaanku uu haysto ugu yaraan shahaadada heerka 1aad ee jaamacadda
(bachelors degree), taas oo la xaqiijin karo ayna bixisay jaamacad caalamku ictiraafsan yahay.
In aan qabiil la isku soo dooran ee degaan la isku soo doorto. 3. In degaanka laga soo dooranayo uu qofku deganaa ugu yaraan 2 sano. 4. In oday dhaqameedyadu ka mid noqdaan bulsho waynta degaankooda, lugna aysan ku
yeelan cidda u tartamaysa doorashada. 5. In sharci ciqaabeed adag laga dejiyo bixinta iyo qaadashada laaluushka doorashooyinka. 6. In murashixiinta lagu sameeyo dambi baaris (full background check) dhamays tiran oo ku
saabsan hantida ay ku leeyihiin gudaha iyo dibadda dalka, iyo in ay xiriir la leeyihiin ama u adeegaan dalal, shirkado, ama shakhsiyaad shisheeye ah. 7. In xisbiyada lagu soo koobo ugu badanaan saddex xisbi oo ku kala duwan waxa ay ka
aaminsan yihiin wax walba oo jira, sida siyaasadda, dhaqaalaha, diinta, iwm. Qaddiyad walba xisbiyada waxaa loo kala saarayaa kuwo bidixda ah, kuwo bartamaha ah, iyo kuwo midigta ah. Siyaasiyiintii isku fikrad ah waxay ku biirayaan xisbiga ugu dhow arigtidooda . Saddexdaas nooc oo xisbi baa laga diiwaan galinyaa gobollada iyo degmooyinka waddanka oo dhan.
Waxaa kale oo iyana muhiim ah in ku nool Soomaaliya oo dhan la diiwaan galiyo loona sameey sharciga aqoonsiga, si loo sugo jiritaankooda, dhalashadooda waddan.
Ugu dambayn, Philosophkii caanka ahaa ee la oran jiray Plato wuxuu yiri hadal macnihiisu yahay haddii dadka wanaagsan aysan ka qayb galin siyaasadda dalka, waxaa hoggaanka ku qabanya kuwo kaa adiga kaa liita (One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by you inferiors.)
Philosopher-ka Socarates-na wuxuu yiri haddii qofka hal-doorka ah uu diido inuu ka qayb galo maamulka, diyaar ha u noqdo in doqon xukumo (The wise man who refuses to rule should prepare to suffer the rule of idiots.)
siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyada diidan doorashada qof iyo codka ah waa kuwo dano gaar ah leh ama shisheeya u adeega oo aan rabin in Soomaaliya ka baxdo bur-burka siyaasadeed, kan dhaqaale, kan qaranimo, iyo kan bulsho toona.
Allah waxaan ka rajaynaynaa in talada waddanka uu noogu dhiibo dad dalka iyo dadka u danaynaya oo ku maamula wanaag, caddaalad iyo waddaninimo.
doorasho qof iyo c od